सर्वदलीय बैठकमा के के भयाे छलफल ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको आजको सर्वदलीय बैठकमा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको रोकथाम, तीनै तहका रिक्त क्षेत्रका उपनिर्वाचन र संसद्का कामकारवाहीका विषयमा छलफल भएको छ । विस्तृतमा
परीक्षण गर्दा ५० प्रतिशतमा संक्रमण, रोकथामको तयारी छैन
नेपालमा थप १ हजार ९६ जनामा कोरोना पुष्टि
दैलेखमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते
कोरोना कहरः भारतबाट फर्किनेको लर्को, जाने घटे
भिओआइपी चलाएको आरोपमा दुईजना पक्राउ
काठमाडौँ । थापाथलीस्थित नर्भिक इन्टरनेशनल अस्पतालले प्लाष्टिक ब्यागमा प्रतिवन्ध लगाउने भएको छ । अस्पतालको २८ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले नर्भिक अस्पताल क्षेत्रमा प्लाष्टिक ब्यागको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेकी हुन् ।
बेनी । न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रंभावित भएको छ । विसं २०७७ फागुन २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो ।
प्युठानमा जिप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, १२ जना घाइते
प्युठान । प्युठानमा जिप दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ जना घाइते भएका छन् । गुल्मीबाट प्युठानको स्वर्गद्वारी दर्शनका लागि जाँदै गरेको जिपमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।
घरायसी विवादमा छोराको कुटाइबाट बुबाको मृत्यु
विराटनगर । घरायसी विवादमा छोराको कुटाइबाट बुबाको मृत्यु भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका– ५ का ६५ वर्षीय काले साहको छोराको कुटाइका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । घरायसी विवादमा छोरा अजयले कालेमाथि गत चैत २६ गते निर्घात कुटपिट गरेका थिए ।
काठमाडौँ । विश्वव्यापीरुपमा बढ्दो वातावरणीय समस्याको न्यूनीकरण तथा संरक्षणमा पूर्वीय संस्कृति एवं सभ्यताको प्रचारप्रसार गराउने उद्देश्यले विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालले प्रसिद्ध आध्यात्मिक गायिका एवं संरक्षणकर्मी आनी छोइङ डोल्मालाई सद्भावना दूत नियुक्त गरेको छ ।
सिरहा । सिरहाको लहान–ठाडी सडकखण्डमा लहान नगरपालिका–१९ मा ट्याक्टरको ठक्करबाट एक बालकको मृत्यु भएको छ । उत्तरतर्फबाट दक्षिणतर्फ आउँदै गरेको स१त ६२७९ नम्बरको ट्याक्टरले ठक्कर दिँदा लहान नगरपालिका–१९ निवासी अजय यादवका अढाई वर्षीय छोरा आशिक यादवको मृत्यु भएको हो ।
मोरङमा प्रतिबन्धित लागुऔषध सहित तीन जना पक्राउ
मोरङ । मोरङमा प्रतिबन्धित लागुऔषध सहित तीन जना पक्राउ परेका छन् । कानेपोखरी– ७ स्थितबाट प्रतिबन्धित लागुऔषध सहित तिन जना पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा रंगेली– ६ का १९ बर्षीय अभिशेख कुमार मण्डल, सुन्दरहरैचा– ७ का १९ बर्षीय सुवाष तामाङ र उर्लाबारी– ६ का २८ बर्षीय अनमोल घिमिरे रहेका छन् ।
२०७७ सालमा के–के भयो ? (फर्केर हेर्दा)
काठमाडौँ । आज वैशाख १ गते, अर्थात्, विसं २०७८ को पहिलो दिन । नयाँ वर्ष हरेक वर्ष आउँछ । वर्षहरू आउँछन् र जान्छन् पनि । समयले धेरै सिकाएको छ । समय कोही कसैले रोकेर पनि रोकिँदैन, छेकेर पनि छेकिँदैन । यो निरन्तर अगाडि बढ्छ ।
इटहरीः नहरमा डुबेर दुई जनाको मृत्यु
सुनसरी । इटहरीस्थित सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहरमा डुबेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।